indlu kwilali endala yokwenza iwayini - I-Airbnb
indlu kwilali endala yokwenza iwayini
Vila de Frades, Beja, Portugal
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFrauke
I-wifi ekhawulezayo ye-188 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Ngamatye amathathu kunye negadi enkulu, indlu yethu ikumema ukuba wonwabele ubomi ngaphandle.
Iindonga ezinombala omhlophe ziqinisekisa imozulu entle yangaphakathi. Indawo yomlilo enkulu, evulekileyo kunye neeradiyetha ziqinisekisa ubutofotofo ebusika.
I-intanethi ngaphandle komda wedatha (khuphela ubuninzi be-200 Mbps) iyafumaneka.
Kubantwana sinebhedi, isitulo esiphakamileyo kunye nebuggy/jogger.
I-Vila de Frades yidolophu eqhelekileyo yewayini ene-adegas ezininzi kunye neevenkile zokutyela, phantse akukho abakhenkethi,
Le ndlu isemaphethelweni ale lali intle. Bambalwa kuphela abakhenkethi abafumana indlela eya eVila de Frades. Ubomi basezidolophini obuqhelekileyo buqhubeka apho bungakhange buphazamiseke. Yonwabela iwayini, itshizi kunye ne-chiourico kwi-adegas encinci uze ubuke iindlela ezincinci zale dolophu encinci kunye nokuhambahamba kwi-Serra do Mendro kunye ne-vinjards yayo.
Ukungena endlwini uza kufumana igumbi lokulala eliphambili ngasekunene. Igumbi elisekhohlo linokusebenza njengegumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala. Umnyango wesibini ngasekunene uya kwigumbi lokuhlambela elineshawa, indawo yokuhlamba iimpahla nefestile eya egadini.
Izitepsi zikhokelela kumphezulu wophahla kunye namagumbi amabini angakumbi asetyenziselwa ukugcina izinto okwangoku.
Xa usiya ngqo uza kufumana igumbi lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo, indawo yokubasa umlilo, iisofa ezimbini kunye nenye indawo elala abantu ababini ukusuka kwigumbi lokuhlala ecaleni kwamabala.
Igadi enkulu ineentyatyambo. Imithi emikhulu efana namakhiwane, iminquma, iiorenji kunye neelemoni, kunye newayini ikhula apho. Umnyango udibanisa i-kichen kunye negadi, ngoko unokufumana isidlo sakusasa, i-BBQ okanye isidlo sangokuhlwa ngaphantsi komakhi-ntathu kwibhanka enezitena.
Ehlotyeni unokuzonwabisa ngemini kwiziko lokuqubha eVidiguera, ekumgama weekhilomitha eziyi-147, okanye kwichibi iAlvito, iOldivelas okanye iAlqueva apho ngokuqinisekileyo uza kufumana indawo yokuba wedwa ukuba ukulungele ukusebenzisa iindlela ezimdaka uze uzifumanele eyakho indlela.
I-wifi ekhawulezayo – i-188 Mbps
4.70 out of 5 stars from 180 reviews
4.70 · Izimvo eziyi-180
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi180
Umbuki zindwendwe ngu- Frauke
Ujoyine nge- 2012 Disemba
Portugal-Fan, spiele gern Gitarre und singe Modas Alentjanas, liebe Katzen und portugiesischen Weißwein, besonders den aus Vila de Frades
Ungandifowunela nanini na ngefowuni okanye uqhagamshelane ne-nigbour yam u-Ana Maria, ekunika izitshixo okanye umhlobo wam uFatima.
Inombolo yomthetho: 937
Iilwimi: English, Deutsch, Português